Indlela i-Google esingatha ngayo izicelo zikahulumeni zolwazi lomsebenzisi – Ubumfihlo kanye Nemigomo – I-Google
Izisebenzeli zikahulumeni emhlabeni wonke zicela i-Google ukuthi idalule iveze lomsebenzisi. Sibuyekeza ngokucophelela isicelo ngasinye ukuqinisekisa ukuthi sivumelana nemithetho esebenzayo. Uma isicelo sidinga ulwazi oluningi kakhulu, sizama ukulinciphisa, futhi ezimweni ezithile senqaba nhlobo ukukhiqiza noma yiluphi ulwazi. Sabelana ngenani nezinhlobo zezicelo esizamukelayo kokuthi Umbiko wethu wokubonisa ngale.
Indlela esisabela ngayo esicelweni iya ngomhlinzeki wakho wesevisi ye-Google — kumasevisi wethu amaningi we-Google LLC, inkampani yase-US esebenza ngaphansi komthetho wase-US, noma i-Google Ireland Limited, inkampani yesi-Irish esebenza ngaphansi komthetho wesi-Irish. Ukuthola ukuthi yimuphi umhlinzeki wakho wesevisi, buyekeza Imigomo Yesevisi ye-Google noma hlola nomlawuli we-akhawunti yakho uma i-akhawunti yakho ye-Google iphethwe inhlangano,
Ukwazisa abasebenzisi ngezicelo zolwazi
Lapho sithola isicelo kusuka kusisebenzeli sikahulumeni, sithumela i-imeyili ku-akhawunti yomsebenzisi ngaphambi kokuveza ulwazi. Uma i-akhawunti iphethwe inhlangano, sizonikeza isaziso kumlawuli we-akhawunti.
Ngeke sinikeze isaziso lapho kuvinjelwe ngokomthetho ngaphansi kwemigomo yesicelo. Sizonikeza isaziso ngemva kokuthi ukuvinjwa okungokomthetho sekukhululiwe, njengalapho inkathi yokuvimbela okunyaziwe noma engumyalelo wenkantolo isiphelelwe isikhathi.
Singase singanikezi isaziso uma i-akhawunti ikhutshaziwe noma intshontshiwe. Futhi singase singanikezi isaziso ezimweni eziphuthumayo, njengokusatshiswa kokuphepha kwengane noma ukusatshiswa kokuphila komuntu othile, lapho sizohlinzeka ngesaziso uma sithola ukuthi isimo esiphuthumayo sesidlulile.
Izicelo zolwazi olwenziwe kuya ku-Google LLC
Izicelo ezisuka kubasebenzeli bakahulumeni wase-US emacaleni aphathelene nezakhamuzi, wokulawulwa kanye nawobugebengu
Ukuchitshiyelwa Kwesine komthethosisekelo wase-US kanye ne- Electronic Communications Privacy Act (ECPA) kuvimbela ikhono likahulumeni lokuphoqelela umhlinzeki ukuveza ulwazi lomsebenzisi. Abaphathi base-US kufanele okungenani benze okulandelayo:
Kuzo zonke izimo: Nikeza incwadi yokubizela enkantolo ukuphoqelela ukuvezwa kolwazi oluyisisekelo lokubhalisa lobhalisile kanye namanye amakheli we-IP
Thola umyalelo wenkantolo ukuphoqelela ukuveza ulwazi lwamarekhodi wokungekhona okuqukethwe, njengezinkambu ezithi Kuya ku, Kusuka ku, CC, BCC, nezesitembu zesikhathi kuma-imeyili
Thola incwadi yegunya lokusesha ukuphoqelela ukuveza ulwazi lokuqukethwe kwezokuxhumana, njengemiyalezo ye-imeyili, amadokhumenti, nezithombe
Izicelo ezisuka kubasebenzeli bakahulumeni emacaleni ahilela ukuvikeleka kwezwe
Lapho kunophenyo oluhlobene nokuvikeleka kwezwe, uhulumeni wase-US angase asebenzise i-National Security Letter (NSL) noma abanye babaphathi abagunyazwe ngaphansi kwe-Surveillance Act (FISA) ukuphoqelela i-Google ukuhlinzeka ngolwazi lomsebenzisi.
I-NSL ayidingi ukugunyazwa kwasenkantolo futhi ingase isetshenziselwe kuphela ukusiphoqelela ukuthi sihlinzeke ngolwazi lobhalisile olunomkhawulo.
Imiyalo nokugunyazwa kwe-FISA kungase kusetshenziselwe ukuphoqelela ukubhekwa kwe-elethronikhi kanye nokuvezwa kolwazi kwedatha elondoloziwe, okubandakanya okuqukethwe kusuka kumasevisi afana ne-Gmail, iDrayivu neZithombe.
Izicelo ezisuka kubaphathi bakahulumeni bangaphandle kwase-US
Ngezinye izikhathi i-Google LLC ithola izicelo zokuvezwa kolwazi lwedatha kusuka kubaphathi bakahulumeni bangaphandle kwase-US. Lapho sithola enye yalezo zicelo, singase sihlinzeke ngolwazi lomsebenzisi uma ukwenza kanjalo kuvumelana nakho konke okulandelayo:
Umthetho wase-US, okusho ukuthi ukufinyelela kanye nokuveza ulwazi kuvunyelwe ngaphansi komthetho wase-US osebenzayo, njenge-Electronic Communications Privacy Act (ECPA)
Umthetho wezwe elenza isicelo okusho ukuthi sidinga ukuthi umbusi ulandele inqubo efanayo kanye nezimfuneko zomthetho ezingase zisebenze uma isicelo kade senziwe kumhlinzeki wasendaweni wesevisi efanayo
Imikhuba yamazwe ngamazwe okusho ukuthi sihlinzeka kuphela ngedatha ezicelweni ezivumelana nemigomo yomkhankaso we-Global Network kunkululeko yokuziveza kanye nobumfihlo kanye nemihlahlandlela yayo yokusebenzisa ehlobene
Izinqubomgomo ze-Google okubandakanya noma yimiphi imigomo yesevisi esebenzayo kanye nezinqubomgomo zobumfihlo ngisho nezinqubomgomo ezihlobene nokuvikelwa kwenkululeko yokuveza umbono
Izicelo zolwazi ezenziwe ku-Google Ireland Limited (kusebenza uma umhlinzeki wakho wesivisi kuyi-Google Ireland Limited)
Ngenxa yokuthi i-Google Ireland inesibopho sokuhlinzeka ngamasevisi amaningi we-Google e-European Economic Area nase-Switzerland, iphinde futhi yamukele izicelo zolwazi lomsebenzisi.
Izicelo zabasebenzeli bakahulumeni wesi-Irish
I-Google Ireland ibheka umthetho wase-Irish lapho ihlola izicelo zolwazi lomsebenzisi zesisebenzeli sesi-Irish. Umthetho wesi-Irish udinga ukuthi abaphathi bokuphoqelela umthetho bathole umyalelo ogunyazwe inkantolo ukuphoqelela i-Google Ireland ukuhlinzeka ngolwazi lomsebenzisi.
Izicelo zabaphathi bakahulumeni ngaphandle kwase-Ireland
I-Google Ireland ihlinzeka ngamasevisi kubasebenzisi abakuyo yonke i-European Economic Area nase-Switzerland, futhi ngezinye izikhathi samukela izicelo zokuveza ulwazi kusuka kubaphathi bakahulumeni abangaphandle kwase-Ireland Esimweni esinjalo, singase sihlinzeke ngedatha yomsebenzisi uma ukwenza kanjalo kuvumelana nakho konke okulandelayo:
Umthetho wesi-Irish, okusho ukuthi ukufinyelela nokuveza ulwazi kuvunyelwe ngaphansi komthetho wesi-Irish osebenzayo, njenge-Irish Criminal Justice Act
Umthetho we-European Union (EU) osebenzayo e-Ireland, pkusho ukuthi noma yimuphi imithetho ye-EU esebenzayo e-Ireland okubandakanya i-General Data Protection Regulation (GDPR)
Izicelo zolwazi ezimweni eziphuthumayo
Uma ngokuphusile sikholelwa ukuthi singakwazi ukugwema othile ekufeni noma ekubhekaneni nokulimala komzimba okungathi sina, singase sihlinzeke ngolwazi kusisebenzeli sikahulumeni — ngokwesibonelo, emacaleni wokusatshiswa kwebhomu, ukudutshulwa esikoleni, ukuthunjwa, ukugwenywa kokuzibulala, kanye nawabantu abalahlekile. Sisabheka lezi zicelo ngokombono wemithetho esebenzayo futhi nowezinqubomgomo zethu.